Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Arnaut Danjuma Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Anyị Arnaut Danjuma Biography na -egosi Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, ndụ nwata, nne na nna (Hauwa na Cees), ezinụlọ, ibi ndụ enyi nwanyị, Net Worth, na Ndụ Onwe ya.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, anyị na -ewetara gị njem ndụ nke onye ọkpọ ahụ, site na mgbe ọ bụ nwata ruo mgbe o biliri na kpakpando. Iji kpalie agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị, lee ntorobịa ya ruo ebe ngosi nka - nchịkọta zuru oke nke Arnaut Danjuma Bio.
Akụkọ banyere Arnaut Danjuma. Lee ndụ ya na Akụkọ Bilie.
Ee, onye ọ bụla maara ka o si bụrụ onye nwa na -enweghị ebe obibi ka ọ bụrụ kpakpando Championship. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ maka akụkọ na-agbanwe ndụ ya, nke na-atọ ụtọ nke ukwuu. N'atụghị egwu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ nwata Arnaut Danjuma:
Iji malite ihe ncheta na -adọrọ mmasị nke onye ọkpọ ahụ, ọ na -ebu aha otutu Arnie. Arnaut Danjuma Groeneveld mụrụ na ụbọchị 31st nke Jenụwarị 1997 nye nna ya Dutch, Cees na nne Nigeria, Hauwa, na Lagos, Nigeria.
Ọ bụ 3rd n'etiti ụmụaka amụrụ site na njikọ n'etiti nne na nna ya. N'ụzọ dị mwute, nwa anyị nwoke dị afọ anọ mgbe nna ya na nne ya gbara alụkwaghịm. Nke a mere ka nwata ya bụrụ oge mgbu na nhụsianya na -agaghị ekwe omume.
Ihu nne na nna ya ka amabeghị maka ụwa egwuregwu bọọlụ. Anyị nwere olile anya na ọ ga -ekpughe onye bụ nna ya na nne ya n'oge adịghị anya.
Agbanyeghị na ọ dịtere aka, Danjuma na nne ya, yana ụmụnne, enweghị ebe obibi mgbe ịgba alụkwaghịm ahụ gasịrị. Ọ na -esiri mama ya ike inweta ezigbo ọrụ na ụgbọ ala maka mkpa ya. N'ihi ya, ọ nọrọ ọtụtụ ụbọchị nwata ya na nlekọta nlekọta.
N'agbanyeghị nkewa nne na nna ya, onye na -eme egwuregwu ka nwere ụdị ikike nna site na nna ya. Danjuma toro ka ya na nwanne ya nwoke nke okenye, Reinier, na nwanne nwanyị, Lisette nọ. Ha bụ ezigbo enyi ya n'oge ọ bụ nwata.
N'ịkwado ịgbapụ na nhụjuanya nwata na -egbu mgbu nke ezinụlọ ya, ọ nwere nkasi obi n'ịgba bọl. Ọ bụ nkasi obi kasịnụ ya ma gbochie ya iche echiche nke ukwuu banyere ọnọdụ mwute nke dapụtara n'ụlọ ya.
Ndabere ezinụlọ Arnaut Danjuma:
Enwere nsogbu akụ na ụba na -enye nsogbu nke dakwasịrị ezinụlọ ya obere oge mgbe nne na nna ya kewara. Ka nna ya na -aga n'ụzọ nke ya, o siiri mama ya ike inweta ọrụ.
N'ezie, ezinụlọ Danjuma mere nke ọma tupu ihe agazighị agazi. Mgbe ego ha dara, ma onye ọkpọ ahụ na ụmụnne ya mechara hie ụra n'ụgbọ ala ma ọ bụ nọrọ oge ụfọdụ n'ụlọ ndị enyi ha.
Ọ bụ ezie na ọ were obere oge ka ezinụlọ ya nweta nguzozi, onye na-agba ọsọ ọsọ ga-ahapụ naanị ụlọ ebe ọ na-azụ nwa mgbe ọ kụrụ elekere 11. Kemgbe ahụ, ọ tolitere dịka nwata ọ bụla nọ n'etiti ezinụlọ.
Mmalite ezinụlọ Arnaut Danjuma:
N'ihi agbụrụ dị iche iche nke nne na nna ya, onye ọkpọ ahụ nwere ike ịnya isi na ya nwere ụmụ amaala abụọ. N'ihi na nne ya na nna ya bụ ụmụ amaala Naịjirịa na Netherland, Danjuma tozuru oke igwu egwu maka obodo ọ bụla ọ họọrọ.
Na -ekpe ikpe site na agba ya, o ketara ụcha akpụkpọ anụ nke nne nne ya. Ee, ọdịdị ya naanị na -enye nkọwa doro anya nke Ihe Nketa Afrịka ya.
Eleghị anya ị maghị na ebe nne Danjuma sitere (Naịjirịa) bụ obodo ndị mmadụ kacha biri na Afrịka. Site n'akụkụ nna ya, o nwere agbụrụ Dutch. Ekele nna ya, nwata nwoke ahụ nwere ike ịpụta maka ndị otu mba Netherlands.
Maapụ Naịjirịa na -egosi ebe amụrụ Danjuma.
Mmụta Arnaut Danjuma:
Otu ihe dị mma gbasara nne na nna ya bụ na ha ekweghị ka esemokwu ha metụta ihe ịga nke ọma ụmụ ha. Ha hụrụ na ma Danjuma na ụmụnne ya ndị okenye nwetara agụmakwụkwọ kwesịrị ekwesị.
Akara bọọlụ gara ụlọ akwụkwọ site na ụlọ ọrụ nlekọta. N'ụzọ na -akpali mmasị, nna ya na -atụda ya n'ụlọ akwụkwọ mgbe niile wee bulie ya n'oge awa mmechi. Danjuma na -agakarị n'ọhịa ịkụziri ụmụaka ndị ọzọ akwụkwọ.
Akụkọ Arnaut Danjuma Football:
Dịka m kwuru na mbụ, naanị ụzọ mgbapụ onye ọkpọ na nsogbu na nhụsianya bụ bọl. Na ndetu a, ọ malitere ịkụ bọọlụ mgbe ọ dị afọ 4. Ọ hụrụ akụkụ niile nke egwuregwu ahụ n'anya ma chọọ inwe ihe ịga nke ọma na ya ka ọdịnihu ga -apụta.
N'oge na-adịghị anya tupu ọ sonye na ntorobịa nke FC Oss. Obi dị m ụtọ na agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ dị n'obodo ebe nna ya bi. Mgbe mgbe, nna ya ga -akpọrọ ya mgbe ọ gachara ụlọ akwụkwọ wee tụba ya n'ụlọ akwụkwọ egwuregwu maka ọzụzụ.
Ndụ ndụ nwata nke Arnaut Danjuma:
Na 2008, ụlọ ikpe ahụ kpebiri na onye ọkpụkpọ ahụ nwere ike ịhapụ nlekọta nlekọta ka ya na nna ya nọrọ. Dị ka chi ga -enwe, ọ sonyekwara na usoro ntorobịa nke PSV Eindhoven n'otu afọ ahụ.
Foto Danjuma na -adịghị ahụkebe na ntọala ntorobịa nke PSV Eindhoven.
O were nnukwu nraranye na ịrụsi ọrụ ike maka Danjuma ịnọnyere ụmụaka ndị ọzọ na agụmakwụkwọ. N'icheta ahụmịhe ya, nke a bụ ihe onye ọkpọ ahụ kwuru gbasara ndụ ọrụ nwata ya.
“Mgbe mbụ m sonyeere PSV, abụ m nnukwu onyinye. Na mbụ, ihe niile dị mma. Mana, ka m na -etolite, o siri ike idobe ọnọdụ m ebe ahụ.
Na 16, ha na -enyekarị ndị egwuregwu ha kwenyere na nkwekọrịta. Agbanyeghị, ha enyeghị m nkwekọrịta ọ bụla n'oge ahụ. ”
Ọ bụ n'oge ụbọchị ya na PSV ka o kwubiri na bọọlụ adịghị mma. Moreso, eziokwu na klọb ya enyeghị ya nkwekọrịta ọ bụla mgbe ọ kụrụ elekere 16 bụ ihe na -akụda Danjuma obi.
Arnaut Danjuma Biography - Okporo Ụzọ Ebube Akụkọ:
Ị maara?… N'agbanyeghị afọ 8 na PSV, onye na -agba ọsọ ọsọ nwere ike igosi n'otu egwuregwu ọkachamara maka klọb ahụ. Akụkọ ndụ ya pụtara ìhè na football abụghị mgbe niile maka onyinye. Mana o nwekwara ụfọdụ ihe ndọrọndọrọ ọchịchị.
N'ịbụ onye iwe juru ebe e mesoro ya ihe na -adịghị mma na PSV, Danjuma bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta na mbufe ya na NEC na 2016. O wereghị ọnwa ise tupu e bulie ya n'òtù mbụ.
Ụbọchị ya na NEC dere ọtụtụ oge na-egbu mmụọ na pitch.
Ọchịchọ mwakpo ya gbochiri ọtụtụ ndị na -agbachitere ya. Ọbụna ọ hapụrụ ndị na -egwu egwuregwu na ndị njikwa dị iche iche n'anya. Dị ka a tụrụ anya ya, ọtụtụ klọb bịara na -achọ mbinye aka ya mgbe ha gbasịrị ike ya na -enweghị ike ịghọta. O mechara binye aka na Club Brugge na 2018.
Akụkọ ndụ Arnaut Danjuma - Bilie ka ewu ewu Akụkọ:
Ịbanye na klọb Belgium nyere ya ihe ùgwù ọ na -echebughị. Na 21, Danjuma pụtara na Champions League megide Atletico Madrid.
N'agbanyeghị na ha na-asọ mpi megide ndị egwuregwu klaasị ụwa dịka Saul Niguez, o gosipụtara iwe mwakpo ya site n'ịgba goolu. Ọbụna o meriri Club Brugge na Belgian Super Cup na 2018.
Ọ joyụ ya enweghị njedebe ka ọ na -ebuli iko Super Cup ya na klọb ya na Belgium.
N'igosipụta na ọ bara uru dị ka onye nku mara mma, Ronald Koeman chọrọ itinye ya na ngwa agha nke ndị otu mba Netherlands. Ka m na -ede akụkọ ndụ a, Danjuma ji nganga nọchite anya obodo ya na asọmpi asọmpi dị iche iche.
Ingga na Top Echelons:
Na 2019, ọ bịanyere aka na AFC Bournemouth nkwekọrịta ogologo oge, nke ruru nde £ 13.7. Ọrụ ya na klọb ahụ pụtara ìhè wee nweta ọtụtụ otuto. Ọ nwetere mmeri Bournemouth Player of the Year award na 2021.
Ọ nwetala ọtụtụ ihe nrite ọbụlagodi mgbe ọ na -egwu egwu n'asọmpi.
Ọdịmma ọgụ Danjuma na ike imepụta ohere ị nweta ihe mgbaru ọsọ dị mma. N'ọnwa Ọgọstụ 2021, ọ bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta, nke ekwuru na Villarreal ruru € 25 nde.
Mgbe ọ na -arụrịta ụka maka Villarreal, Danjuma si na bench pụta iji nyere ha aka nọrọ otu ebe merie Atletico site n'ịgba goolu ha nke abụọ. Ndị ọzọ, dị ka ha na -ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Arnaut Danjuma Ndụ Ndụ - enyi nwanyị, nwunye, nwa?
Enweghị esemokwu, ọ nwere ọmarịcha anya nke na -adọta ọtụtụ ndị nwanyị na -akwado ya. N'ezie, ọtụtụ n'ime ha chọrọ ka Danjuma lee ha anya n'ebumnuche nke ịmalite mmekọrịta ịhụnanya.
Kedu onye ga -abụ enyi nwanyị onye egwuregwu Dutch?
Agbanyeghị, onye ọkpọ ahụ enweghị ebumnuche ịbanye n'ime ịhụnanya ọ bụla ugbu a. Ndị tozuru oke dabara n'ọnọdụ ya dị ka nwunye ma ọ bụ enyi nwanyị nwere ike ga -eche obere oge.
Dị ka Myron Boadu, Danjuma na -ahọrọ ilekwasị anya n'ọrụ ya karịa ihe ọ bụla ọzọ. Ka m na -ede akụkọ ndụ a, ọ nweghị enyi nwanyị, ọ nweghịkwa akara ọ na -abanye na mmekọrịta na 2021.
Ndụ nke Arnaut Danjuma:
Ngwa ngwa ngwa dị ka Joshua Zirkzee, onye na -enwe mmasị inwe oge dị mma naanị ya. Ọ dị nwayọ, a na -edekwa aura nke ụdị ịdị umeala n'obi ya niile.
Enwere oge Danjuma ga -etinye ihe ntị ntị ya ka ọ nụ ụfọdụ egwu udo. Enweghị obi abụọ ọ bụla, o ketara n'ezie ihe omume Aquarius zodiac.
Ịmụmụ ọnụ ọchị ya na -egosipụta otú o si anụ ụtọ ụtọ ụtọ nke abụ ọ na -ege.
Otu ihe ntụrụndụ kacha amasị ya bụ igwu mmiri. Ọ na -agakarị n'ọdọ mmiri mgbe ọzụzụ ọzụzụ gasịrị iji belata nchekasị ya. Agbanyeghị na ọ na -enwe mmasị ikiri bọọlụ basketball, Danjuma biputere naanị foto arụsị basketball ya (Michael Jordan) otu ugboro na ibe Instagram ya.
Ọ nweghị ike inye aka kama soro ndị mmadụ chịa ọchị mgbe ọ na -aga igwu mmiri.
Ndụ Arnaut Danjuma:
Football enyerela aka nye onye dribbler ụdị ndụ dị oke egwu. N'agbanyeghị ọtụtụ ihe isi ike n'oge ọ bụ nwata, ndụ Danjuma atụgharịala ugbu a maka ọdịmma.
Site na nnukwu ụgwọ ọnwa ya, ọ na -aga ezumike na Dubai, ebe ọ na -eme njem ụgbọ mmiri dị iche iche ruo n'obi ya.
Ọ kwụsịrị ụgbọ mmiri n'oge ezumike ya na Dubai.
Ụgbọ ala Arnaut Danjuma:
Dị ka Nathan Ake, onye na -agba ọsọ nwere anya maka ịnya ụgbọ ala okomoko. O nwere ụdị dị iche iche nke jeep dị oke ọnụ yana ụlọ mara mma. Lee nlele nke otu n'ime ụgbọ ala ya na foto dị n'okpuru.
Mgbalị egwuregwu ya enyela ya ụdị ụgbọ ala dị iche iche. Ọ bụ ọmarịcha anya ịhụ Danjuma ka ọ na -eguzo n'akụkụ njem ya.
Ezinaụlọ Arnaut Danjuma:
Ịzụlite n'ezinaụlọ nke nwere ajọ oge gara aga bụ n'ezie ahụmịhe siri ike. N'ihi nkwado nke onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ya, Danjuma, ya na ụmụnne ya na nne ya, lanarịrị ihe na -esote ịgba alụkwaghịm.
Ama m na ị na -achọ ịmata ihe mere onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ya. N'ihi ya, anyị na -ewetara gị akụkọ gbasara ezinụlọ Danjuma na ngalaba a.
Banyere nna Arnaut Danjuma:
Nna ya, Cees, bụ ihe kpatara onye ọkpọ ahụ ji nwee ike ịchụso egwuregwu bọọlụ. Ọbụlagodi mgbe ọ kewapụrụ onwe ya na nne Danjuma, Mr Cees nọgidere na -emezu ọrụ nna ya.
Ugboro ugboro, ọ na -akpọrọ nwa ya ụlọ akwụkwọ wee weghachite ya n'ụlọ mgbe emesịrị. Ọ bụkwa ya ka ọ na -akpọrọ Danjuma n'ọgbọ egwuregwu bọọlụ n'oge awa ọzụzụ.
Dị ka onye ọkpụkpọ ahụ si kwuo, nna ya na nne ya ka na -enwe mmekọrịta dị mma n'agbanyeghị ịgba alụkwaghịm ha. Mr Cees na -ahụ mgbe niile na ọ na -ekiri egwuregwu nwa ya mgbe ọ bụla ọ pụtara ịrụ ọrụ ya n'ọhịa.
Banyere nne Arnaut Danjuma:
Nne onye na -eme egwuregwu tara ahụhụ nke ukwuu mgbe ịgba alụkwaghịm ya. Aha ya bụ Hauwa, ọ na -etinyekwa nnukwu mbọ n'inyere ụmụ ya aka ịlanarị mgbe ihe dị egwu. Mgbe ụfọdụ, Hauwa na ụmụ ya na -arahụ n'ụgbọ ala mgbe ha enweghị ebe ha ga -anọ.
Dịka m kwuru na mbụ, nne onye ọkpụkpọ a bụ onye Naịjirịa, ọ na -akwado ya mgbe niile n'ụzọ kacha mma o nwere ike. Mgbe Danjuma nwere ihe ịga nke ọma site na ịgba bọl, ọ nwetara ụlọ maka nne ya na ụmụnne ya.
Banyere ụmụnne Arnaut Danjuma:
Kemgbe o buliri ama, onye na -eme egwuregwu ekwuola naanị ụmụnne ya abụọ. Ha bụ nwanne ya nwoke, Reinier na nwanne nwanyị, Lisette. Ọbụnadị ụmụnne ya na ezinụlọ na -azụlite biri mgbe nne na nna ha gbara alụkwaghịm.
Ka m na -achịkọta akụkọ ndụ a, nwanne Danjuma enwetala nzere Master ya ebe nwanne ya nwanyị gụkwara akwụkwọ wee gụchaa na Imperial College London. N'okpuru bụ foto na -adịghị ahụkebe nke onye na -eme egwuregwu na nwanne ya nwanyị mara mma.
N'ime oge Sallah, ya na ụmụnne ya na -ezukọkarị ka ememme a. N'ezie, Danjuma na nwanne ya nwanyị nwere nkekọ a na -apụghị ikewa ekewa.
Banyere ndị Arnaut Danjuma:
N'ịgakwuru ndị ikwu ya, enwebeghị ozi gbasara nna nna ya na nne nne ya. N'otu aka ahụ, ndekọ gbasara nne na nna Danjuma adịghịkwa na ịntanetị.
Eziokwu Arnaut Danjuma:
Iji weta akụkọ ndụ onye ọsọ ọsọ, nke a bụ eziokwu ole na ole ga -eme ka ị mata akụkọ ndụ ya.
Eziokwu nke 1: Ndị uwe ojii jidere aka na -ezighi ezi:
N'etiti Machị 2020, Danjuma na-aga ije na Hilton ka ọ nweta ihe ọ ga-eri. Na mberede, ndị uwe ojii 2 kwụsịrị ụgbọ ala ha n'akụkụ ya mgbe otu n'ime ha rịọrọ ya ka o tinye aka ya n'elu ụlọ ụgbọ ala ahụ.
Onye egwuregwu ahụ nwere ihere na nkụda mmụọ n'ihi na ọ maghị ihe mpụ ya bụ. Ndị mmadụ nọ na -ese foto ya, nke mere ka ọkụ gbaa ya. Ndị uwe ojii jidere ya n'ụzọ na -ezighi ezi maka ikpe igbu ọchụ nke ọ maghị maka ya.
Ka oge na -aga, otu n'ime ndị uwe ojii gosipụtara na ọ bụghị onye ha na -achọ. N'ihi ya, ha hapụrụ ya ka ọ laa.
Eziokwu # 2: Net Worth Ma Salary Ndakpọ:
N'ime ụbọchị ya na Bournemouth, Danjuma na -enweta ụgwọ ọnwa kwa afọ nke € 1,693,958 (£ 1,456,000). Ka anyị na -enyocha ego ọ na -akpata, anyị mere atụmatụ na 2021 Net Worth ya bụ nnukwu ego nke million 6 nde.
Ndakpọ ụgwọ ọnwa Arnaut Danjuma Bournemouth - 2021 na Euro (€)
Kwa Afọ: € 1,693,958
Ọnwa kwa: € 141,163
Kwa Izu: € 32,526
Kwa :bọchị: € 4,647
Kwa elekere: € 194
Nkeji nkeji: € 3.2
Ị maara?… Otu onye Dutch ga -arụ ọrụ afọ anọ iji nweta ihe Danjuma na -enweta n'ime otu ọnwa. Anyị etinyela nyocha maka ụgwọ ọnwa winger ka elekere na -aga. Hụ ego ole o mere kemgbe ị bịara ebe a.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Arnaut Danjuma's Bio, nke a bụ ihe o nwetara.
Eziokwu nke 3: Arnaut Danjuma Religion:
Ịmụrụ nne nne Alakụba na -eme mkpebi ya iguzosi ike n'okwukwe Alakụba. Ee, Danjuma ji mpako n'okpukpe ya wee hụ na ọ kwadoro ụkpụrụ omume nke okwukwe ya.
Ihere anaghị eme ya ikwuwapụta ịhụnanya ya maka Islam ebe ọ bụla ọ hụrụ onwe ya. N'okpuru ebe a bụ onyonyo nke onye ọkpụkpọ nwere nkà ji obi umeala na -ekpe ekpere n'oge Ramadan.
Agbanyeghị na ọ bụ onye egwuregwu bọọlụ siri ike, ọ na -enyekarị Chineke nsọpụrụ. Hụ otú o si rara onwe ya nye ndụ ekpere ya.
N'ikpe ikpe ya, Danjuma nwere ikike ịrịgo n'ọkwa Pedro Neto. Ee, ọ nwere nnukwu ọgụ ọgụ nke mere ka ọ bụrụ nhọrọ ziri ezi maka ndị egwuregwu.
Anyị na -atụ anya na ọ ga -ewulite ike ya na isi okwu ya ka ọdịnihu ga -apụta. Nke a bụ foto nke 2021 FIFA Stats nke na -enyocha ụfọdụ ike bọọlụ ya.
Site na nyocha ahụ, Danjuma ga -arụrịrị ọrụ n'ike ya. N'ezie, ogo ya dị oke mma n'agbanyeghị na ọ dị obere.
Tebụl dị n'okpuru na -ekpughere ozi gbasara Arnaut Danjuma Life Story. Ọ na -enye gị ohere ịgagharị na profaịlụ Dutch ozugbo enwere ike.
Aha n'uju: Arnaut Danjuma Groeneveld
aha otutu: Arnie
Ụbọchị ọmụmụ: Ọnwa Iri 31, 1997
Ebe amụrụ onye: Lagos, Naijiria
Ụmụnne: Reinier na Lisette
Ezigbo Net: Million 6 million (2021 Ọnọdụ)
Rygwọ ọnwa kwa afọ: 1,693,958 1,456,000 (£ 2021) - XNUMX Stats
N'agbanyeghị ihe isi ike o nwetara n'oge ọ bụ nwata, Danjuma lekwasịrị anya na nrọ ya. N'oge ahụ, enweghị nkwa na ọ ga -aga nke ọma. Mana, ọ gara n'ihu na -azụ ma na -atụ anya ihe kacha mma.
N'ikpeazụ, ọchịchọ ya ghọrọ ihe mere eme. Ọ na -eme anyị obi ụtọ ịkele nne ya, onye guzoro n'akụkụ ya n'oge ihe isi ike. Moreso, nna ya (Cees), onye hụrụ na ọ kwụsịghị ọzụzụ, kwesịkwara inweta otuto ụfọdụ.
N'ezie, ezinụlọ Danjuma niile nwere nganga ịnwe ya na ndụ ha. Site na ịrị elu ya ka ọ bụrụ onye ama ama, o buliela nwanne ya nwoke na nwanne ya na nne na nna ya na ịda ogbenye.
Daalụ maka ịgụ akụkọ Arnaut Danjuma Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu. Kọọrọ anyị echiche gị gbasara profaịlụ ya na ngalaba dị n'okpuru.